Published On: Wednesday, November 28, 2018 | Source: NRNA SWITZERLAND
गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद स्वीजरल्याण्ड, महिला फोरमले आज (२८, नोभेम्बर २०१८) मा नेपालको पहिलो अस्पताल वीर अस्पतालमा सहयोग स्वरुप ह्विलचेयर हस्तान्तरण गरेको छ । वीर अस्पतालमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा एनसीसी स्वीजरल्याण्ड महिला फोरमका सल्लाहकार एवं पूर्व उपाध्यक्ष विजया भट्ट र गैरआवासीय नेपाली संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. हेमन्त दवाडीले महिला फोरमको तर्फबाट अस्पतालका निमित्त निर्देशक डा. सरोज शर्मालाई ह्विलचेयर हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।
राष्ट्रिय समन्वय परिषद स्वीजरल्याण्डका महिला संयोजक शुभ एल्मर लामाको संयोजनमा अस्पताललाई १२ वटा ह्विलचेयर प्रदान गरिएको हो । विशेषगरी वीर अस्पतालमा आउने सर्वसाधारण बिरामीको सेवाका निम्ति सो सहयोग गरिएको हो । कार्यक्रमको सुरुवातमा गैरआवासीय नेपाली संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. हेमन्त दवाडीले एनआरएनए तथा महिला फोरमको बारेमा प्रष्ट पार्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा डा. शर्माले सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि निरन्तरता रहने आशा व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रममा अस्पतालका तर्फबाट शर्मा सहित नर्सिङ विभागका प्रमुख रिना श्रेष्ठ र नाक कान घाँटी विशेषज्ञ डा. जयेन्द्र प्रधानको उपस्थिती रहेको थियो । यस्तै संघका सचिवालय सदस्यहरु, तथा अन्य सञ्चारकर्मीको उपस्थिती रहेको थियो ।
5 months ago,NRNA SWITZERLAND भ्रमण वर्षलाई सघाउन सबैसँग अपिल
10 months ago,NRNA SWITZERLAND गैर-आवासीय नेपाली संघ, स्विट्जरल्याण्डको अधिवेशन सम्पन्न अध्यक्षमा सुब्बा
11 months ago,NRNA SWITZERLAND शुभ एल्मर बनिन् युरोपकै मोष्ट एक्टिभ महिला संयोजक
12 months ago,NRNA SWITZERLAND वुमन फोरम स्विजरल्याण्डद्दारा तालिम तथा सिलाई मेसिन वितरण
1 year ago,NRNA SWITZERLAND बारा र पर्साका पिडितका लागि स्विट्जरल्याण्डबाट ३ लाख ६० हजार रुपैयाँ सहयोग